Забур 108 CARS - Nnwom 108 AKCB
1Onyankopɔn, me koma asi pi;
mede me kra nyinaa bɛto wʼayeyi nnwom.
2Munnyan, sanku ne bɛnta!
3Awurade, mɛkamfo wo wɔ aman mu;
mɛto wo ho nnwom wɔ nnipa no mu.
4Wʼadɔe so, ɛkorɔn sen ɔsoro;
7Onyankopɔn akasa afi ne kronkronbea se,
na masusuw Sukot Bon.
8Gilead yɛ me de; Manase nso saa ara;
9Moab yɛ me guasɛn,
10Hena na ɔde me bɛkɔ kuropɔn a wɔabɔ ho ban no mu?
11Onyankopɔn, ɛnyɛ wo na woapo yɛn
12Boa yɛn tia ɔtamfo no,
13Onyankopɔn wɔ yɛn afa yi, yebedi nkonim,
AKCB : Nnwom 108